Vacu-loss – Novu
A multipolar radiofrequency (RF) body treatment that incorporatesasuctioning technique that delivers RF into the deeper layers of the skin at different frequencies to eliminate excess fats more efficiently.
CONSISTENCY — Promotes collagen regeneration, which results in stretch mark reduction andasmoother skin surface.
CONTOUR — Breaks down stubborn fats while tightening the skin foramore contoured appearance.
Usingaunique suction technology that createsabroad matrix of heat to target multiple depths of tissues, this multipolar radio frequency machine is able to deliver RF energies efficiently to induce the death of fat cells through lipolysis at the specific treatment area. In addition, it also stimulates the lymphatic drainage through efficient circulation, thus eliminating the destroyed fat cells effectively out of the system. To help achieve patient’s desired results, the treatment temperature is regulated throughout.
Hard and/or stubborn fats
Sagging and/or lax skin
Therapeutic Phase: Six to eight sessions every one to two weeks
Maintenance Phase: Once every two weeks to once every month
Minimal. Redness might occur at the treated area, if any, which should dissipate within 30 minutes to an hour after.
အစွန်းစုံ ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း(RF)ကုထုံး ဖြစ်သည်။ ဤကုထုံးတွင် စုပ်ယူနည်းပညာပေါင်းစပ်ထားကာ RF အား မတူညီသော ကြိမ်နှုန်းများဖြင့် အရေပြား၏ အတွင်းပိုင်းအလွှာများအထိရောက်ရှိစေ၍ အဆီပိုများကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ပယ်ဖျောက်ပေးသည်။
အသားအရေညီညာမှု- ကိုလာဂျင်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းကို အားပေးကာ အကြောပြတ်ရာများ လျော့နည်းစေပြီး ပိုမိုချောမွတ်သော အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်စေသည်။ ပေါ်လွင်စေမှု- ချရခက်သောအဆီများကို ဖြိုခွဲပေးပြီး အရေပြားအားတင်းရင်းစေသောကြောင့် ပိုမိုပေါ်လွင် သောအသွင်သဏ္ဍာန်ကို ရရှိစေသည်။
အပူပေးပုံစံအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေသော ထူးခြားသည့် စုပ်ယူခြင်းနည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည်။ ၎င်းသည် တစ်ရှူးလွှာ အနက်အမျိုးမျိုးကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ဤအစွန်းစုံရေဒီယိုကြိမ်နှုန်းစက်မှ ကုသလိုသော နေရာအတိအကျသို့ RF စွမ်းအင်များကို ထိရောက်စွာသက်ရောက်စေပြီး အဆီပြိုကွဲခြင်း ဖြစ်စဉ်ဖြင့် အဆီဆဲလ်များကိုသေဆုံးစေသည်။ ထို့အပြင် သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းမွန်စေပြီး လင့်ဖ်ရည် စီးဆင်းမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးကာ ကိုယ်ခန္ဓာစနစ်အတွင်းမှ ပျက်စီးသွားသော အဆီဆဲလ်များအား ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးပါသည်။ ကုသမှုခံယူသူ အလိုရှိသောရလာဒ်များရရှိစေရန် ကုသချိန်အတွင်းအပူချိန်ကို လိုအပ်သလိုချိန်ညှိပေးပါသည်။
ချရခက်သော နှင့်/သို့မဟုတ် ခေါင်းမာသော အဆီများ
အရေပြားအိတွဲကျခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် လျော့ရဲခြင်း
ကုသခြင်းအဆင့်: တစ်ပတ် သို့ နှစ်ပတ်တိုင်း ခြောက်ကြိမ်မှ ရှစ်ကြိမ်အထိ
ထိန်းသိမ်းခြင်းအဆင့်: နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်မှ တစ်လတစ်ကြိမ်အထိ
အနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ ကုသခြင်းခံယူသောနေရာတစ်ဝိုက်တွင် နီရဲခြင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ချေရှိ၍ ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိပါက မိနစ် ၃၀ မှ တစ်နာရီအတွင်း ပျောက်ကွယ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
© 2019 NOVU AESTHETICS. ALL RIGHTS RESERVED